စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်များ | USAHello ကနေအလုပ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. သငျသညျစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ယူနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီးအကြောင်းကို Read. သင်လိုအပ်သောအရာကိုလေ့ကျင့်ရေးထွက်ရှာဘယ်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်.
အမေရိကန်ငါး၏ပုံရိပ်ကိုယဉျကြေး & တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဝန်ဆောင်မှု
စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်များလယ်ယာအလုပ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုပါဝင်သည်. လယ်ယာလုပ်သားများကောက်ပဲသီးနှံများစိုက်ပျိုး, တိရိစ္ဆာန်များမြှင့်, နှင့်စားနပ်ရိက္ခာသို့လယ်ယာထွက်ကုန်များကိုဖွင့်. ဒုက္ခသည်များ, ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ, နှင့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအားလုံးနိုင်ငံ၏စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်ရန်ကူညီ.
ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ဦးလယ်ယာစိုက်ပျိုးနောက်ခံရှိသည်နှင့်တစ်ဦးလယ်ယာအလုပ်လုပ်ချင်. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျတခုစိုက်ပျိုးရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်လေ့ကျင့်ပေးရန်ချင်ပါတယ်. စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအကြောင်းကို Read နှင့်မည်သို့စတင်ရန်.
အသေးစားလယ်သမား - လူအတော်များများအသေးစားခြံအော်ဂဲနစ်သို့မဟုတ်အထူးကုအစားအစာများကိုထုတ်လုပ်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသင့်ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာစတင်ကာအလုပ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်.
လယ်ယာလုပ်သား - ကြီးမားသောခြံပေါ်လယ်ယာလုပ်သားများတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူသို့မဟုတ်ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်အတူဖြစ်စေအလုပ်လုပ်.
အသား packer - အလုပ်တိရိစ္ဆာန်များသတ်နဲ့စက်ရုံတစ်ရုံကဲ့သို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အသားထုပ်ပိုး. အခြားစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်များထက်ကျန်းမာရေးအာမခံပူဇော်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိ. အတော်များများကအသား-ထုပ်ပိုးအပင်ဒုက္ခသည်များ employ.
ရာသီအလိုက်အလုပ်သမား - ရာသီအလိုက်လုပ်သားများမကြာခဏသီးနှံရိတ်ခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးခြင်းရာသီအောက်ပါယူနိုက်တက်တဝိုက်ခရီးသွားလာသူကိုရွှေ့ပြောင်းများမှာ. သူတို့ကရိတ်, စက်ရုံ, ပေါင်းပင်, ရေ, ဤအသီးနှံများကိုထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် load. အများစုမှာရာသီအလိုက်လုပ်သားများရှိပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူနှင့်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများသူတို့သည်ဆင်းရဲသားဖြစ်ကြ၏နေကြတယ်.
အတွင်းစိတ်မြို့တော်စီမံကိန်း - လူအတော်များများစေတနာ့ဝန်ထမ်းခွင့်အလမ်းများနှင့်မြို့မွေးမြူရေးခြံနှင့်ရပ်ရွာဥယျာဉ်အပေါ်အချို့ပေးဆောင်ရာထူးရှိပါတယ်.
လယ်ယာစက်ပစ္စည်းအော်ပရေတာ - လယ်ယာမြေပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများအော်ပရေတာကပိုသင်တန်းနှင့်လက်မှတ်လိုအပ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကမကြာခဏပိုကောင်းအခပေးသည်အခြားလယ်ယာလုပ်သားများထက်ဝယ်လိုအားဖြစ်ကြပြီး.
အစိုးရစစ်ဆေးရေး - စိုက်ပျိုးရေးစစ်ဆေးရေးမှူးသေချာအစားအစာကောက်ပဲသီးနှံနှင့်တိရစ္ဆာန်တွေကိုစနစ်တကျကြီးပြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးကိုလိုက်နာနေကြပါစေ, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စည်းမျဉ်းများ.
လယ်ယာမန်နေဂျာသို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးရေးကြီးကြပ်ရေးမှူး - မန်နေဂျာလယ်ယာလုပ်သားများကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ, လယ်ယာမှလယ်ယာကနေခရီးသွားလာသူကိုအထူးသဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား.
Agribusiness - စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခြမ်းအတွက်အလုပ်အကိုင်များ, အရောင်းနှင့်အခြားအထောက်အကူပြုစက်မှုလုပ်ငန်းများအပါအဝင်, ကြီးထွားလာနေကြတယ်. ဤရွေ့ကားအလုပ်အကိုင်များကိုပိုပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးပူဇော်.
သိပ္ပံပညာရှင်များ - စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံသည်မြေဆီလွှာသိပ္ပံနှင့်စက်ရုံမျိုးရိုးဗီဇလည်းပါဝင်သည်.
စိုက်ပျိုးရေးခက်ခဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်ဖြစ်ပါသည်. လယ်ယာလုပ်သားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောလူခိုင်မာတဲ့ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. အတော်များများကစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်များလည်းစက်ပစ္စည်းကိုသုံးပါ, ဒါကြောင့်စက်နှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်သူတစ်ဦးအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်လိုပါက, စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အသငျသညျကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမဲ့လယ်ယာအလုပ်အန္တရာယ်ရှိသည်, သငျတို့သစက်တွေန်းကျင်သတိပေးချက်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်တိရစ္ဆာန်များ. သငျသညျတာဝနျမြားအပျေါယူနိုင်ကြသည်ဆိုပါက, ထို့နောက်လယ်ယာမန်နေဂျာသို့မဟုတ်ကြီးကြပ်ရေးမှူးဖြစ်ခြင်းသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်ဖြစ်မည်အကြောင်း. ဘာသာစကားနှစ်ခုစကားပြောသောလယ်ယာလုပ်သားတွေရဲ့မန်နေဂျာဘို့ကြီးစွာသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါသည်.
စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်များကယ်လီဖိုးနီးယားရှိစီးပွားရေးကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, တချို့နှစ်လယ်ပိုင်းအနောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များ. အဆိုပါနို့ထွက်ပစ္စည်း, အသီး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသားစက်မှုလုပ်ငန်းအမြဲလယ်ယာလုပ်သားများလိုအပ်. သူတို့ကအများအားဖြင့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုသို့မဟုတ်အထက်တန်းကျောင်းပညာရေးမမေးကြဘူး. အဆိုပါလယ်သမားသို့မဟုတ်လယ်ယာမန်နေဂျာသင်လေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်. သို့သော်ဤအလုပ်အကိုင်များကောင်းစွာပေးဆောင်ကြသည်မဟုတ်. အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအဆိုအရ, ပိုပြီးအားလုံးလယ်ယာလုပ်သားများ၏ထက်ဝက်ထက်အထောက်အထားမဲ့ဖြစ်ကြ.
သည်အခြားစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်များပညာရေးနှငျ့အခြို့လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်နိုင်ပါသည်. အစိုးရအလုပ်အကိုင်များ, ထိုကဲ့သို့သောစိုက်ပျိုးရေးစစ်ဆေးရေးအဖြစ်, နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မလိုအပ်. သငျသညျနိုင်ငံသားများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ယူနိုင်ပါသည် အခမဲ့အွန်လိုင်းနိုင်ငံသားလူတန်းစား.
လယ်ယာမြေအမြောက်အမြားနှင့်အတူဒေသများရှိရပ်ရွာကောလိပ်များစိုက်ပျိုးရေးအတွက်အတန်းပူဇော်. သူတို့ကနှစ်နှစ်တွဲဖက်ရဲ့ဒီဂရီပူဇော်. သငျသညျတိရိစ္ဆာန်သိပ္ပံတွဲဖက်ဘွဲ့ရနိုင်, စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံသို့မဟုတ်ဇီဝဗေဒ. လယ်ယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်, သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးလယ်ယာလုပ်ငန်းကိုစတင်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင်သည်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်. အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များမှာအများအပြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်တန်းများရှိပါသည်. သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာပါ.
သငျသညျအခြို့သောယူနိုင်ပါသည် အဆိုပါကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်ကအသေးစားလယ်တွေအစီအစဉ်ကနေအွန်လိုင်းသင်တန်းများ သို့မဟုတ် U.S ကနေဘေးကင်းလုံခြုံရေးဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှု. စိုက်ပျိုးရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစင်တာများ.
အတော်များများကဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူလယ်ယာစိုက်ပျိုး၏အသိပညာနှင့်အတူအမေရိကမှလာ. ယူအက်စ်အေတလွှား, သငျသညျကိုထောက်ပံ့သောအစီအစဉ်များကိုရှာတှေ့နိုငျ, ဒုက္ခသည်လယ်သမားလေ့ကျင့်သို့မဟုတ် employ. ဤတွင်သူတို့ထဲကအချို့:
ဟာဝိုင်ယီ: Kunia စိုက်ပျိုးရေး Incubator
မိန်း: The New American ရေရှည်တည်တံ့သောစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်း (NASAP)
မက်ဆာချူးဆက်: New Entry ရေရှည်တည်တံ့သောစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်း
မစ်ဆူရီ: International Institute ကို Global လယ်တွေ
Tennessee ပြည်နယ်: အတူတကွကြီးထွားလာ
အလုပ်တစ်ခုစင်တာကိုသုံးပါ: အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့များမှာ. သူတို့ကအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ် applications များနှင့်အတူကူညီ. သူတို့ကအလုပ်သင်တန်းနှင့်ပညာရေးရန်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်. သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင်စင်တာကိုရှာပါ.
အွန်လိုင်းရှာရန်: Aghires သော website တစ်ခုစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်များစာရင်းပြုစုနေပါတယ်.
Spotlight:တွေ့ဆုံမောရစ် slimy, နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကမ္ဘာ့ကောက်ပဲသီးနှံလယ်ယာပိုင်ရှင်
တွင် 2002, မောရစ် Gbolo လိုင်ဘေးရီးယားကနေဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်တောင်ပိုင်းနယူးဂျာစီသို့ပြောင်းရွှေ့. ယနေ့တွင်, သူကနောက်ကျောကိုသူချစ်သောသူဘာလုပ်နေလဲဖြစ်ပါတယ် - သူ၏ဇာတိပြည်မှမိမိအအကြိုက်ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးနှံများကိုလယ်ယာ.
မောရစ် slimy အကြောင်းကိုဗွီဒီယိုတစ်ခု Watch